ONN-Sagantaa Qophii Miseensoota ABO fii Hawaasa Oromoo Jizaan Ilaalchisee gaafiif deebii Kichuu
HomeAfaan OromooRadioONN-Sagantaa Qophii Miseensoota ABO fii Hawaasa Oromoo Jizaan Ilaalchisee gaafiif deebii
ONN-Sagantaa Qophii Miseensoota ABO fii Hawaasa Oromoo Jizaan Ilaalchisee gaafiif deebii
Viva Guddataa Araddoo/Kan garbummaa keessa turee koloneeffataa waliin nu hacuucaa bobaa diinaa jalatti guddatetu osoo garboomee hin argin bilisummaa labsaa paartii ajaa’ibaa ijaaruuf jira
Fincila xumura Garbummaa FXM
Murnaa,garee fi dhuunfaan saba kanaaf yaadu taanaan safuu,duudhaa akkasumas kabaja waaraa saba kanaaf ijaarsa gamtaa fi tokkummaa siyaasaa akka sabaatti qabaachuuf jecha ka’uumsa bu’uuraa kan dantaarraa walaba tahe qabaachuu nu barbaachisa.
Akka haala qabatamaa biyya kana keessa jiru argaa jirrutti dhaabbilee siyaasaa oromummaa golgaa godhatanii diinaaf dalagan hundi ummata afaan faajjessaa jiru malee kan karaa haqaatiin cichanii gaaffii ummata oromoo deebii haa argatu jedhan lakkoofsan 2 hin caalan. Isaanis eenyu faadha yoo jettan deebiin koo daawwitii haqaa keessatti ilaalaan jedha. Isaanis firaa fi halagaatu itti duulee balleessuuf daboo wal waamaa jira waan taheef ifa galaadha isa jedhuudha.
Sodaan duula ijibbaataa kunis dhaabbileen jajjaboon lamaan kanneen walirraa ittisuuf gamtaa oromummaa harcaasuuf kan godhamaa jiru isaanuu walitti baqanii tokko yoo tahan jedhanii shororkaa hamaa keessa waan jiran fakkaata. Isaan kanaan ala kan jiran afaan oromootiin kan loqeeffaman malee dhigaan halagaa akka tahan gochaa fi raawwiin isaanii caalaa garaan hin jiru.
Murni eenyummaa keenya dahoo godhate kunneenis bifa lamaan jiru. Isaanis warra sobee aangoo qabna jedhee galma minilik keessaa bookkisaa duubbeen isaa garee TPLF akkasumas kanneen aangoo duraanii harkaa bubuuteen dhaalame fi Kanneen jijjiirama baanamu kana tumsaa garaaf geeraru of keessaa qaba.
Isaan kunneen hundi safuu,duudhaa fi aadaa sabummaa gatanii oromummaa keessatti ilaalcha habashaa qaban kan garbummaa keessa turanii koloneeffataa waliin nu hacuucaa bobaa diinaa jalatti guddatantu osoo garboomanii hin argin bilisummaa dharaa labsaa paartii ajaa’ibaa ijaaruuf dhidhiitatuu barbaadu.
Jaarsummaan shiraan guutame kun yoom Qabsoo Oromoorraa dhaabbata?
“ABO tokkoomsina” jechuudhaan gareen tokko jaarsa araaraa ta’ee dhiyaataa jira. Araarri gaariidha. “Duubee araara sanaa maaltu jira” jedhanii wal gaafachuufi waa hubachuun gaariidha. Jaarsummaan siyaasa keessaa jaarsummaa ollaa bunaa waliin tokko miti. Dhibdee siyaasaa furuu barbaachisa. Adeemsa mootummaa qorachuu barbaachisa.
Ta’us, jaarsoliin araaraa kun doorsifamaa jiru. Mootummaatu doorsisaa jira.
ABOnis dhimma kanarratti ejjennoo ifaa qaba. “Erga boordii filannootti galmoofnee booda waa’ee araaraa haasa’uu dandeenya!” jechuun Hayyu Dureen ABO BBC News Afaan Oromoo irratti dubbatee ture. Ammas akkasuma!
‘Ma’akalaawwiin’ daawwannaaf banaa tahuu irratti yaada dararamtoota duraanii.
በኦሮሚያ የቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት እንዳይቋቋም ቅዱስ ሲኖዶስ መንግሥትን ተማፀነ